RASMI: Kylian Mbappé oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee Globe Soccer 2021 … (Yaase ku guuleystay tababaraha sanadka ee Globe Soccer?) – Gool FM
(Dubai) 27 Dis 2021. Waxaa la shaaciyey laacibka ku guuleystay abaal-marinta xiddiga ugu wanaagsan sanadka ee Best Player of the Year Globe Soccer Award 2021 iyo weliba tababaraha sanadka ee Globe Soccer.
Munaasabaddan oo si weyn loo agaasimay laguna bixinayey abaal-marintannada Globe Soccer Awards ayaa lagu qabtay caawa Magaalada Dubai, iyada oo ay ka soo qeyb galeen marti sharaf kala duwan ee xafladda lagu casuumay.
Weeraryahanka reer France iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa loo caleemo saaray xiddiga ugu wanaagsan sanadka ee Best Player of the Year Globe Soccer Award 2021.
Kylian Mbappé ayaa ku guuleystay abaal-marintan, isagoo ku garaacay xiddigo badan oo kubadda cagta ah sida Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Mohamed Salah iyo Karim Benzema.
Waxaa xusid mudan in Mbappe uu xiliciyaareed aad u wanaagsan la qaadanayo kooxda PSG, isaga oo dhaliyay 10 gool wareega koowaad ee horyaalka Faransiiska, xilli laga war qabo in qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa uu dhacayo dhamaadka xiliciyaareedkan, mana uusan cusbooneysiinin qandaraaskiisa ilaa hadda.
Dhinaca kale Roberto Mancini ayaa isna ku guuleystay tababaraha sanadka ee abaal-marintan Global Soccer, kaddib markii uu xulka qaranka Talyaaniga ku hoggaamiyay koobka qarammada Yurub ee Euro 2020.
Mid ka mid ah daafacyada Kooxda Barcelona oo laga helay Korona Fayras